Mankanesa ao amin'ny Internet Marketing Marketing: La Guida Da Semalt
Vohikala maro no tonga isan'andro. Sarotra ho an'ny mpikamabana ny hahomby amin'ny fifaninanana androany. Noho ity antony ity sy ny antony maro hafa, ny marketing maody amin'ny aterineto dia tokony hanampy ireo fanombohana hahazo ny aterineto, izaydia hentitra be amin'ny fanaovana raharaham-barotra mahasoa. Ohatra, ny Search Engine Optimization (SEO) dia manana anjara andraikitra amin'ny fanaovana tranonkalaManàna filaharana tsara amin'ny aterineto.
Ireo manam-pahaizana an-tserasera dia mampiasa teknika maro hamoronana ny fisian'izy ireo amin'ny aterinetomarika tsy manam-paharoa ary miantoka ny hiverenan'ny rindran-kira, ny fifamoivoizana, ny fitarihana, ary ny tena zava-dehibe, ny mpanjifa. Ka ahoana no hahatonga ny ankamaroan'ny aterineto marketing ho an'ny orinasanao? Ivan Konovalov, tompon'andraikitra manam-pahaizana Semalt Digital Services, dia manazava ny fitsipika mifehy ny fampiroboroboana amin'ny Internet - criacao sites gratis br.
Fahadisoana goavana izay ataon'ny mpandraharaha maro dia manomboka tranonkala e-commerce avy amin'ny fitsiriritan'ireo izay nahomby ny namany. Izy ireo dia mijery ireo tarehin'ny namany izay ataony ary maika hanomboka tranonkala iraytsy misy fantany izay zavatra ilainy mba hahatratrarana izany fahombiazana izany. Ny fivarotana amin'ny aterineto dia dingana lava, izay mikendry ny mpampiasa tena avo lenta. Mba hahatratrarana ny fahombiazana dia ny fikirizana sy ny faharetana no singa manan-danja, miaraka amin'ny herisetra sy ny asa mafy amin'ny fampiarahana isan-karazanyonline marketing methods. Ohatra, ny fanentanana SEO mahomby mandritra ny enim-bolana dia manomboka mahazo valiny manan-danja.
Ampiasao ny angona sy ny mombamomba
Ny fanadihadiana ny data sy ny metrics dia tena ilaina amin'ny fiantohana ny fahamarinan-toeranany votoaty an-tserasera. Ohatra, ny drafitry ny varotra na hetsika ara-barotra dia miankina amin'ny drafi-pifanarahana manokana. Vokatr'izany, ny votoaty manokana sasanyTsy maintsy misy ny tetik'asa fitantanana ny fitantanana. Ireo tiroitra ireo dia manampy anao hanara-maso ny fivoaranao manerana ny fivarotana fivarotana manontolo. In Ireo tranga hafa dia afaka mampiasa fampahalalana manan-danja mba handinihana ny fomba amam-panao amin'ny fomba isan-karazany ary manao fanitsiana ilaina mba hahatongavana amin'ny tanjona fampielezan-kevitra.
Mampiasà fomba samihafa
Fahendrena ny manitatra ny fampielezan-kevitra amin'ny aterineto amin'ny fantsona vaovao.Ny hevitra sy ny fisainana vaovao dia mampivelatra ny fototra ijoroanao. Ankoatra izany, raha tsy mahomby ny iray amin'ireo fivarotana varotra, dia mbola afaka mahazo vola ianaoamin'ny alalan'ny fantsona hafa. Hevitra tsara izany satria tsy nahomby ny iray tamin'ireo fantsona. Ampahany amin'ny fananganana tranonkala iray, zava-dehibe nyMamorona pejy ho an'ny haino aman-jery sosialy ho an'ny vohikala rehetra izay ahafahan'ny votoaty sarobidy toy ny blaogy sy ny hafatra ho an'ireo mpanjifanao amin'ny tambajotra sosialytoerana. Ny fampiasana votoatin'ny video sy fomba hafa enti-manampy dia manampy anao handefa fisiana an-tserasera amin'ny fomba maro. Manome mpanjifa avy amin'ny isan-karazanyIreo sahan-kevitra dia midika fa ny asanao dia hijanona ho miorina na dia misy iray aza mandavo.
Aloavy amin'ny dokam-barotra
Azo atao ny manatratra tanjona isan-karazany amin'ny fampiasana dokam-barotra tsotrateknika. Ohatra, ny fahazoana mpanjifa dia azo tanterahana amin'ny alàlan'ny fantsona maro toy ny media sosialy. Na izany aza, mandoa vola kelyHanampy ny fampielezan-kevitra amin'ny fampielezan-kevitra dia hanampy anao hanamaivana ny fandraisana anjara. Indraindray, mendrika ny hampiasa vola dolara vitsivitsyao anatin'ny fampielezan-kevitrareo. Ity fizahan-tany ity dia afaka mamela malalaka anao amin'ny sehatra hafa amin'ny fivarotana an-tserasera ary dia manatsara izanyfandrosoana. Ny lisitr'ireo tranonkala tsara handoavana ny dokam-barotra dia ahitana ny Google AdWords sy ny sehatra media sosialy Facebook.